network with linux — MYSTERY ZILLION
January 2009 edited February 2011 in Linux/Unix
linux နဲ့network ချိတ်တဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ပါတယ်......
ကျွန်တော် သုံးတဲ့စက်မှာ connection မိပြီလို့ပြောပါတယ်...
ဒါပေမယ့် တခြားစက်ကိုလှမ်းခေါ်ချင်ရင် ဘယ်လိုခေါ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိလို့..
ကျွန်တော်က linux ကို အခုမှစပြီးသုံးတာ မို့လို့ပါ......
ဘယ် Linux သုံးတာလဲ... Gnome လား KDE လား... Gnome ဆိုရင်တော့ Places > Network ကနေ သွားရင် ရပါတယ်
Samba ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒါက Windows နဲ့ Linux အချင်းချင်း network sharing အတွက်သုံးတာ။ သူက Ubuntu မှာဆိုရင် default ပါလာပြီးသား။ ( တစ်ခြားဟာတွေဆိုရင် သွင်းရတယ် ထင်တယ် )
NFS ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ သူကတော့ Linux to Linux အတွက်ပါ။
ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် ပြောပြပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်စက်တွေသုံးနေတာလဲ။ Windows နဲ့ Linux ချိတ်မှာလား။ ဘယ် Linux Distro လဲ။ အဲဒါလေးတွေပေါ့ဗျာ။ စုံစုံလင်လင်လေးပြောပေးပါ။
OS ကို XP တင်ထားပါတယ်..
အဲ့ဒီမှာ.. virtual box သုံးပြီး.. Ubuntu တင်ထားပါတယ်.။
ကျွန်တော် DSL သုံးပြီး. XP ရော Virtual Box ပေါ်က Ubuntu မှာပါ အင်တာနက် သုံးချင်ပါတယ်။
Router နဲ့ ဆိုရင်တော့ DHCP လား.. အဲ့ဒီဖန်ရှင်သုံးပြီး ခွဲလို့ရတယ်လို့သိထားပြီး။
မိုဒမ်နဲ့ ပဲဆိုရင်ဘယ်လို လုပ်လို့ရနိုင်မလဲ သိချင်လို့ပါ။
If you are using PPP (modem connection), the procedure would be the same since VMWare (I'm assuming it's what you are using since it's the most popular at this moment) would create your adapter in the XP network configuration for every VM. The internet connection would be handled by XP and forward your Ubuntu connection to the same physical interface via NAT (Network Address Translation). You may need to enable Connection sharing in XP although I'm not quiet too sure since I haven't mess with Windows for far too long.
Just use Network Bridge in Virtual box.
Gnome KDE.. ဆိုတာကိုဘယ်ကွဲခြားရသလဲ
KDE , GNOME , Xcfe တို ့ဆို Desktop Environment တွေဖြစ်ပါတယ်။ Linux distro အများစုကို DE သုံးခုနဲ ့ဖွဲ ့စည်းထားတယ်လို ့အကြမ်းဖြင်းပြောနိုင်ပါတယ်။ Linux distro တွေမှာ DE တွေကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ DE တွေပေါ်မူတည်ပြီး ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုရတဲ့ tool တွေပါမတူတော့ပါဘူး။ ဥပမာ gedit ကို KDE မှမပါသလိုပါ။ KDE မှာပါတဲ့ tools တွေအားလုံးလိုလိုဟာ K နဲ ့စလေ့ရှိပြီး GNOME မှာစတဲ့ tools တွေတော်တော်မျာများဟာလည်း G နဲ ့စလေ့ရှိပါတယ်။ window အမြင်နဲ ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ theme တွေလို့အကြမ်းဖျင်းပြောလို ့ရပြီးတော့ အမှန်တော့ DE တစ်ခုဟာ theme တစ်ခုဆိုတာထက်အများကြီးပိုပါတယ်။